Tenga Shelf Kambani mune 106 Nyika
Sirifu Kambani inotangira pamadhora mazana maviri
Iyo yakanakisa uye Iyo yakakura yekupa sevhisi
Isu tinopa Shelf Kambani Kutenga sevhisi mune angangoita ese mativi ePasi, Sirifiti Kambani Services mu106 Nyika
Mitengo Yakanakisisa Yemakwikwi
Kumbira Rubatsiro rwemahara
Maitiro ekutenga Shelf Kambani
EXTRA CARE inofanirwa kutorwa, nepo, ichitenga Shelf Kambani, chaiyo AUDIT inofanirwa KUVANZWA, kudzivirira kuvhunduka uye kushamisika.
Titumire chako chinodikanwa, isu tinokupa iwe runyorwa rweanowanikwa masherufu makambani Sarudza> Kutenga> Kutanga
Mushure mekubhadhara, tipei dzenyu shanduko dzinochinja kune Kambani, semuenzaniso; Shanduko yezita, shandura (s) kune kambani chimiro, Wedzera kana kuderedza share capital, nezvimwe.
Zvichienderana nechikumbiro (s) chako, nyanzvi dzedu dzaizogadzirira zvinyorwa zvekambani zvinoenderana nezvinowanzo kutora mazuva matatu kusvika mashanu.
Kambani yako ikozvino iri kushanda uye yakagadzirira kushandisa kubudirira kwako mune ramangwana.
Zvese zvaunoda Kuti Uzive nezve Shelf Kambani
Shelf kambani inoumbwa chaizvo uye yakasara isina chero bhizinesi zviitiko. Aya makambani anotengeswa kuvanhu (s) vanoshuvira kutanga mabasa ebhizinesi kuburikidza nekambani yavo pasina kuita maitiro ekuisa imwe nyowani. Zvikonzero zvakajairika zvekutenga sherufu kambani zvinosanganisira zvinotevera:
Shelf Kambani inochengetedza nguva inosanganisira yekubatanidza kambani nyowani.
Shelf Corporation inobatsira kuratidza kureba kwemakambani, kukwezva vatengi vatsva uye / kana vanoisa mari
Shelf Kambani inobatsira kuwana mukana wekambani kiredhiti
Shelf Corporation inobatsira kuwana mukana wekubhadhara zvibvumirano. (Kune akawanda masimba ekutonga ayo anoda kuti kambani inofanirwa kunge iri mubhizinesi kune imwe nhambo yenguva yekukumbira zvibvumirano)
* Cherechedzo: Makambani e Shelf anowanzo kudhura kupfuura kubatanidzwa kutsva nekuda kwezera ravo.
Chinangwa chemakambani sekutaurwa mu charter kune mazhinji emakambani masherufu aripo, akasarudzwa nechinangwa chekuti kambani ikwanise kuita munenge muzvikamu zvese zvebhizimusi, zveindasitiri uye zvevatengesi.
Iko kubatana kunowanikwa mukati memaawa mashoma
Kunyoresa murejista yekutengesa
Pari zvino pamutemo kugona
Hapana yapfuura bhizinesi basa
Hapana zvikwereti kana zvisungo
Hapana dambudziko renjodzi
* Cherechedzo: Makambani eSherufu anowanzo kudhura kupfuura kubatanidzwa kutsva nekuda kwezera ravo (mwedzi mitatu kusvika makore mashanu).
Ndokumbirawo mupe magwaro anotevera ekutenga sherufu kambani kune vese maDirector, Vanobatsira Varidzi, Vagovani, Vagumi Vanosaina Signatureies:
Notarised kopi yepasipoti yako inoshanda. Ipasipoti inofanirwa kusainwa uye siginecha inofanidza siginecha iri fomu rekunyorera. Mufananidzo wacho unofanirwa kuve wakajeka uye wehunhu hwakanaka.
Yekutanga kana yakasimbiswa kopi yeBhengi retsamba tsamba (yakanyorwa kwete kupfuura 3 mwedzi). Anenge mabhanga ese pasi rese anoburitsa "Refer Letter". Unogona kungokumbira Refer Letter kubva kubhengi rako, kwaunobata account. Tsamba yekureva inofanirwa kuratidza kusimbisa kwenguva yehukama, Nhamba yeAccount, zviri nani kubvumirana pane musi wacho uye kutaurwa kwe “account account ndeyegutsa”.
Mune zviitiko apo vanogovana uye / kana vatungamiriri vari maboka emakambani, kuzere kwakazara kwevakanyorwa magwaro emakambani kunodiwa: Rondedzero yeVatungamiriri, Chitupa Chokupinza, Rondedzero yevose Varidzi, Munyori weKambani, Mugovana Zvitupa, kopi ye 'Kuziviswa kweTrust' pakati peavo vanogovana shareholder (sa) nemuridzi (muridzi) anobatsira (kana zvichizoshanda), Chitupa Chekunamira Kwakanaka. (Izvi zvinongoshanda chete kana, kambani yanga ichishanda kwemwedzi gumi nemaviri kana kupfuura iyo mwedzi gumi nemaviri)
Notarised kopi yepasipoti inoshanda (s), yekushandisa bhiri (sechiratidzo chekero) uye tsamba yekubhenekera yega kune wega wega Director (s), Anobatsira Muridzi (s) uye Kwabiwa
Isu tinopa Shelf Kambani masevhisi kune epasi rose mabhizinesi masangano ari pazasi ataurwa masimba:
Unoda Shelf Kambani?
Shelf Kambani Albania
Shelf Kambani Antigua uye Barbuda
Shelf Kambani Argentina
Shelf Kambani Armenia
Shelf Kambani Australia
Shelf Kambani Austria
Shelf Kambani Azerbaijan
Shelf Kambani Abu Dhabi
Shelf Kambani Bahamas
Shelf Kambani Bahrain
Shelf Kambani Belarus
Shelf Kambani Belgium
Shelf Kambani Belize
Shelf Kambani Bolivia
Shelf Kambani Bosnia uye Herzegovina
Shelf Kambani yeBrazil
Shelf Kambani Bulgaria
Shelf Kambani BVI
Shelf Kambani Canada
Shelf Kambani Cayman Island
Shelf Kambani Chile
Shelf Kambani China
Shelf Kambani Costa Rica
Shelf Kambani Croatia
Shelf Kambani Cuba
Shelf Kambani Kupro
Shelf Kambani Czech Republic
Shelf Kambani Denmark
Shelf Kambani Dubai
Shelf Kambani Dominica
Shelf Kambani Dominican Republic
Shelf Kambani Ecuador
Shelf Kambani Estonia
Shelf Kambani Fiji
Shelf Kambani Finland
Shelf Kambani France
Shelf Kambani Georgia
Shelf Kambani Germany
Shelf Kambani Greece
Shelf Kambani Grenada
Shelf Kambani Guatemala
Shelf Kambani Hong Kong
Shelf Kambani Hungary
Shelf Kambani Iceland
Shelf Kambani India
Shelf Kambani Ireland
Shelf Kambani Indonesia
Shelf Kambani Iran
Shelf Kambani Italy
Shelf Kambani Japan
Shelf Kambani Kazakhstan
Shelf Kambani Kuwait
Shelf Kambani Kyrgyzstan
Shelf Kambani Latvia
Shelf Kambani Liechtenstein
Shelf Kambani Lithuania
Shelf Kambani London
Shelf Kambani Luxembourg
Shelf Kambani Makedonia
Shelf Kambani Malaysia
Shelf Kambani Maldives
Shelf Kambani Malta
Shelf Kambani yeMarshall Islands
Shelf Kambani Mauritius
Shelf Kambani Mexico
Shelf Kambani Micronesia
Shelf Kambani Moldova
Shelf Kambani Monaco
Shelf Kambani Montenegro
Shelf Kambani Netherlands
Shelf Kambani New Zealand
Shelf Kambani Norway
Shelf Kambani Panama
Shelf Kambani Papua New Guinea
Shelf Kambani Paraguay
Shelf Kambani Philippines
Shelf Kambani Poland
Shelf Kambani Portugal
Shelf Kambani Puerto Rico
Shelf Kambani Qatar
Shelf Kambani Romania
Shelf Kambani Russia
Shelf Kambani Saint Kitts naNevis
Shelf Kambani Saint Lucia
Shelf Kambani San Marino
Shelf Kambani Saudi Arabia
Shelf Kambani Serbia
Shelf Kambani Seychelles
Shelf Kambani Singapore
Shelf Kambani Slovakia
Shelf Kambani Slovenia
Sirifu Kambani South Africa
Shelf Kambani South Korea
Shelf Kambani Spain
Shelf Kambani Sri Lanka
Shelf Kambani Sweden
Shelf Kambani Switzerland
Shelf Kambani Taiwan
Shelf Kambani Tajikistan
Shelf Kambani Thailand
Shelf Kambani Turkey
Shelf Kambani Ukraine
Shelf Kambani UAE
Shelf Kambani United Arab Emirates
Shelf Kambani UK
Shelf Kambani United Kingdom
Shelf Kambani United States
Shelf Kambani US
Shelf Kambani USA
Shelf Kambani Uruguay
Shelf Kambani Vanuatu
Shelf Kambani Venezuela
Shelf Kambani Vietnam
Shelf Kambani Alabama
Shelf Kambani Alaska
Shelf Kambani Arizona
Shelf Kambani Arkansas
Shelf Kambani California
Shelf Kambani Colorado
Shelf Kambani Connecticut
Shelf Kambani Delaware
Shelf Kambani Dunhu reColumbia
Shelf Kambani Florida
Shelf Kambani Hawaii
Shelf Kambani Idaho
Shelf Kambani Illinois
Shelf Kambani Indiana
Shelf Kambani Iowa
Shelf Kambani Kentucky
Shelf Kambani Louisiana
Shelf Kambani Maine
Shelf Kambani Maryland
Shelf Kambani Massachusetts
Shelf Kambani Michigan
Shelf Kambani Minnesota
Shelf Kambani Mississippi
Shelf Kambani Missouri
Shelf Kambani Montana
Shelf Kambani Nebraska
Shelf Kambani Nevada
Shelf Kambani New Hampshire
Shelf Kambani New Jersey
Shelf Kambani New Mexico
Shelf Kambani New York
Shelf Kambani North Carolina
Shelf Kambani North Dakota
Shelf Kambani Ohio
Shelf Kambani Oklahoma
Shelf Kambani Oregon
Shelf Kambani Pennsylvania
Shelf Kambani Rhode Island
Shelf Kambani South Carolina
Shelf Kambani South Dakota
Shelf Kambani Tennessee
Shelf Kambani Texas
Shelf Kambani Utah
Shelf Kambani Vermont
Shelf Kambani Virginia
Shelf Kambani Washington
Shelf Kambani West Virginia
Shelf Kambani Wisconsin
Shelf Kambani Kuuya
Tinogona kukutsigira neakavhura bank account yekambani yako. Mune mazhinji emasimba munofanirwa kupa zviitiko zvebhizinesi renyu uye zvirongwa zvenguva yemberi, humbowo hwezviitiko zvebhizinesi razvino uchishandisa bhurosha rako rekambani, webhusaiti, zvibvumirano zvebhizinesi, chibvumirano chemubhadharo (kana zvichishanda).
Shelf Kambani neBhangi Akaundi
Ongorora * Izvi hazvishande kutanga mabhizinesi ekutanga.
Mamirioni Vagadziri havatsigire kana kupa masherufu ekambani masevhisi kune akambotaurwa chikamu (s) emabhizimisi:
Shelf Kambani Service haisi kuwanikwa kwemakambani kana munhu mumwe nemumwe ari kubata mudziyo inogona kutungamira mukushungurudzwa kwekodzero dzevanhu kana kushandiswa mweya wekushungurudzwa.
Shelf Makambani Service Service haina kuwanikwa kumakambani kana munhu ari kuita kutengeserana, kugovera kana kugadzirwa kwemaoko, zvombo, mimumu, mercenary kana chibvumirano.
Shelf Kambani Service haisi kuwanikwa emakambani kana munhu ari kubata mukuongororwa kwehunyanzvi kana bugging zvishandiso kana mafekitori espionage.
Shelf Makambani Services Services haawanikwe kune makambani kana munhu ari kubata mune chero zvisiri pamutemo kana zviitiko zvezviitiko kana munhu (ma) akasviba akanyorwa pasi pemutemo wenyika chero.
Shelf Kambani Sevhisi haisi kuwanikwa emakambani kana munhu ari kubata kuGenetic zvinhu.
MaSherf Company Services haawanikwe emakambani kana munhuwo zvake ari kuita zvine njodzi kana njodzi zvipenyu, makemikari kana nyukiliya izvo zvinosanganisirawo, michina kana michina inoshandiswa kugadzira, kubata kana kurasa zvinhu zvakadaro.
Shelf Kambani Dziviriro haisi kuwanikwa emakambani kana munhu mumwe nemumwe ari kuita mukutengeserana, kuchengetedza kana kufambisa nhengo dzeMunhu kana mhuka, kushungurudzwa kwemhuka kana kushandiswa kwemhuka kwese kuongorora kwesainzi kana kwechigadzirwa.
Sirifiti Makambani Services haawanikwe kumakambani kana munhu anoshanda mumasangano ekurera, kusanganisira nzira dzekurera mubereki kana chero nzira yekushungurudzwa kwekodzero dzevanhu;
Shelf Kambani Service haisi kuwanikwa kweChinamato cult uye avo rubatsiro.
Shelf Makambani Service Service haawanikwi kune makambani kana munhu ari kubata mune Zvinonyadzisira.
Shelf Kambani Service haina kuwanikwa kumakambani kana munhu mumwe nemumwe ari kuita mukutengesa Piramidhi.
Shelf Kambani Services haina kuwanikwa kumakambani kana munhu ari kubata muDrug paraphernalia.
Shelf Company Service haina kuwanikwa kune bhizinesi zviitiko, izvo nemirairo nemirairo yenyika yekuumbwa kweInternet inoitiswa marezinesi uye inoitwa pasina kupihwa rezinesi.